Ardayda ajaanibta ah oo lacag siyaado ah laga qaato - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardayda ajaanibta ah oo lacag siyaado ah laga qaato
La daabacay tisdag 10 maj 2016 kl 11.18
Linlu Gou: "Waa arrin la yaab leh"
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Foto: Fredrik Persson/TT sawir: FREDRIK PERSSON
Ardayda jaamacadeed ee ka yimid waddamada ka baxsan Yurub, una yimid Iswiidhan si ay wax u bartaan, ayey jaamacadaha waddanku ka qaataan lacag labanlaab ah marka loo barbar dhigo inta laga qaato ardayda Iswiidhishka. Sidaas ayaa laga ogaaday baadhitaan ay l´aanta Ekot ka sameeysay arrinkan.
-Waa arrin la yaab leh, ayey sheegtay Linlu Guo oo ah ardayad ka timid waddanka China.
Ardayda la mid Linlu ee ka yimid waddamada ka baxsan Yurub ayey jaamacadaha waddanku ka qaataan lacag labanlaab ah, marka loo barbardhigo lacagaha laga qaato kuwa Iswiidhan ka yimid. Lacagtan ayaa marmarka qarkood gaadhi karta dhowr iyo toban kun.
Linlu Guo ayaa sheegtay in u reerkoodu isticmaaleen lacagta yar ee ka soo gasha warshada ay ka shaqeeyaan oo cudbiga soo saarta si ay u bixiyaan waxbarashada gabadhooda.
Linlu ayaa ka mid ah 4000 ee arday ee sannadkii hore lugu khasbay in ay lacag bixiyaan si ay jaamacadaha Iswiidhan wax uga bartaan.
Wexeey ku khasban tahay in ay bixiso lacag gaadhaysa 90.000 oo koroon halkey ardayda Iswiidhishka ku tahay 45.000 oo koroon sannadkii, lacagtaas oo ay dabeetana dawladuu ka bixiso arday kasta oo Iswiidhish ah, hadii u doonayu in u jaamacad wax ka barto.
-Waa xaalad aan caddaalad ku dhisnayn, weligey isma odhan in ay Iswiidhan sidan tahay, ayey sheegtay Linlu Guo.
Baadhitaanka ay l´aanta Ekot sameeysay ayaa sheegaya in ardayda ka yimid waddamada ka baxsan Yurub laga qaado lacag dheeraad ah oo u dhexeeysa 20.000 ilaa 60.000 sannadkii, marka loo barbardhigo kuwa ka yimid Iswiidhan amba wadamadda Yurub.
Dhanka kale ayey dawladda waddanka hogaamiisa baadhin jaamacadaha waddanka iyo lacagaha ay ka qaataan ardaydan, in kasta oo sharciga u ogolaanaya jaamacadaha in ay ardayda ka ya midid wadamadda ka baxsan Yurub, lacag dheeraad ah ka qaataan, la soo dejiyay shan sanno ka hor.
Sannadkii hore ayey lacag gaadhaysa 500 bilyan oo koroon jamaacadaha ka soo gaadhay lacagaha ay ka qaataan ardaydan.
-­Anagu ma doonayno in aanu lacag dheeraad ah ka qaadano ardayda halkan u yimid in ay wax bartaan. Goolkeenu wuxuu yahay in aan ardaydan waxbarasho wanaagsan siino, ayuu sheegay Jerker Dahne oo hogaamiya qeeybta xuquuqda ardayda ee jaamacada magaalada Stockholm.